Waa maxay HIV iyo AIDS? | Zanzu
HIV waa cudurka galmadda lagu kala qaaddo (STI).
HIV waxay u taagantahay fayraska la dagaalama Difaaca Jidhka Aadamaha. Waa fayras weerara nidaamka difaaca jidhkaaga. Haddii aad qabto HIV oo aanad qaadan dawooyin, nidaamkaaga difaaco waa uu sii daciifaa. Wakhti dheer ka dib dawo la'aan, jidhkaagu iskama difaaci karo wax dheeraad ah oo ku lid ah cudurada. Markaas waxaad qabtaa AIDS. Qofka qaba AIDS ma dhici karto inuu noolaado inta uu noolaanayo qofka aan qabini.
Dawooyinka ayaa xakamayn kara HIV Laakiin HIV lama dawayn karo. Dawooyinka HIV qof qaba HIV waxa uu ku noolaan karaa nolol caadi ah
Haddii aanad si adag u raacin daawayntaada, waxaad u gudbin kartaa HIV dadka kale, xataa haddii aanad lahayn astaamaha weli.
Nin taagan. Xoog saarida xididada dhiiga.
Faahfaahinta xididka dhiiga wata unugyo badan oo dhiiga cad ah kuwaas oo jidhka ka ilaalinaya cudurada
Faahfaahinta xididka dhiiga leh fayras yar oo HIV oo weerara unugyada cad ee dhiiga
Faahfaahinta xididka dhiiga leh fayras badan oo HIV iyo keliya wax yar oo unugyada cad ee dhiiga oo hadhay. Jidhka iskama difaaci karo wax badan oo dheeraada cudurada.
Nin jiifa sariir oo jirran, haddii aad qabto HIV oo aanad qaadan dawooyin muddo wakhti dheer ah, waxaad noqonaysaa mid jirran.
Ninka qaadanaya dawooyinka HIV: HIV lama dawayn karo, laakiin waa la xakamayn karaa.
Faahfaahinta xididka dhiiga, markaad qaadato dawooyinka HIV, in yar oo fayraska HIV ayaa ku hadha dhiiga, laakiin in dheeraad ah ma weerari karto unugyada dhiiga cad ee kaa ilaaliso cudurada.
Markaad qaadato dawooyinka HIV, qofka qaba HIV waxa uu ku noolaan karaa nolol caadi ah.
Garashada haddii aad qabto HIV
Si aad u ogaato haddii aad qabto HIV, waxaad u baahantahay in lagu baadho.
La hadal xirfad yaqaanka caafimaad haddii aad doonayso in lagaa baadho HIV.
Nin la hadlaaya xirfad yaqaanka caafimaadka
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Waa maxay HIV iyo AIDS?